ချိန်းတွေ့ရင် ဘာတွေပြောရမလဲ ? – Gentleman Magazine
ချိန်းတွေ့ရင် ဘာတွေပြောရမလဲ ?
ဆော်တွေ ကိုချိန်းတွေတဲ့ အချိန်ကျ ရင် သူမ ပျော်နေအောင် ၊နောက်တစ်ခါ ထပ်တွေ့ချင် အောင်၊ သူမရဲ့အသည်း ကို သိမ်းပိုက်နုိုင်အောင် ဘာတွေပြောရမလဲ ဆုိုတာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ယောက်ျားလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ သင် ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း သင်လုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုဟာ နောက်တစ်ခါ ထပ် တွေ့ရေး မတွေ့ရေး ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားနို်င်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ သင့်နောက်တစ်ခါ ချိန်းတွေ့တဲ့ အချိန်ပြောရမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ဒါကို ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့ တစ်ခောက် နှစ်ခောက်လောက်မှာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
လက်ညိုး နှင့် လက် သူကြွယ် ကွာခြားခြင်းအကြောင်း
အများသောအားဖြင့် လူတိုင်းရဲ့ လက်ညိုးနဲ့ လက်သူကြွယ် ဟာ အတိုင်းကွာပါတယ်။ အဲဒီကွာခြားရတာ အလကားသက်သက် မဟုတ်ပဲ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ လူတိုင်းက မမွေးခင် မိခင်ဝမ်းထဲမှာ ရှိစဉ် က မိခင်ရဲ့ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ မိခင်မှာ တက်စတုိုစတုန်း ခေါ် (ကျား) ဟော်မုန်းများ နေခဲ့တယ်ဆိုရင် လက်သူကြွယ်က ပိုရှည်နေတက်ပါတယ်။ အကယ်၍ လက်ညိုးကပိုရှည်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အိစတုိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ (မ)ဟော်မုန်းကများနေခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်း လွမ်းမိုးမှု က လက်ညိုး အတိုအရှည် ပေါ်မှာ တင်မရပ်သွားပဲ ကြီးလာသည် အထိ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို လွမ်းမုိုးမှု အနည်းနဲ့ အများရှိနိုင်ပါတယ်။
လက်ညိုးရှည်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ (မ) ဟော်မုန်းများခဲ့တဲ့အတွက် မိန်းမဆန်ဆန်နေတက်ပြီး အချက်အပြုတ်စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ အလှအပ မက်မောခြင်း၊ ချွဲနွဲ့တက်ခြင်း၊ တဝန်တိုစိတ်များခြင်း၊ စတဲ့ မိန်းမလေးတော်တော်များ များမှာ ရှိတက်တဲ့ အကျင့်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားတက်ကြပါတယ်။ အကယ်၍သား သမီးရလာပြီဆိုတဲ့ အခါကျရင်လဲ သားသမီးတွေ အပေါ် ဂရုစိုက် ၊ အနစ်နာခံ တဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။
တဖန်လက် သူကြွယ်ရှည်တဲ့ မိန်းခလေးများက တော့ မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိပြီး လူအများနှင့် အပေါင်းအသင်းဆံ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ကို ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်ချင်ခြင်း၊ စွံစားရဲကာ လုပ်ရဲကိုင်ရဲ ရှိခြင်း စတဲ့ အချက်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားမှာပါ။ ထုိုမိန်းခလေးများကတော့ မိမိ လုပ်ငန်းများကို ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်သော ယောက်ျားသဘာဝကို ပိုမိုနားလည်နို်င်သော မိန်းခလေးများဖြစ်နိုင်မည်။ တဖန် ယောက်ျားများကို အထင်ကြီးတဲ့စိတ် လည်းနည်းမည်ဖြစ်ကာ ယောက်ျားမရှိလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရပ်တည်နိုင်သည်ဟု ယူဆထားသော ဆွာကျယ်လေးများဖြစ်နို်င်သည်။
(ဖော်ပြပါအချက်များသည် ယေဘုယ အားဖြင့် ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များဖြစ်၍ သင့်ဆော်နှင့် အသေငြင်းရန် အတွက်မဟုတ်ပါ။ တချို့သောသူများသည် ဖော်ပြပါအချက်များ နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် မီးစင် ကြည့်ကကြပါရန်)
နောက်ထပ် ကောင်းတာက သူ့ရဲ့လက်ကို ပေါ်တင်ကိုင်ဖို့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ဘယ်ဘက်လက် ကို အရင်ကိုင်ပြီး မှ “အောင် ညာဘက်လက်ကို ကြည့်ရမှာ ဟုပြောကာ ညာဘက်လက်ကိုထပ်ကိုင်ပြီး ပြောပြရင်း ခဏခဏ ထပ်ထပ်ကိုင်လို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဖြင့် ချဲ့ထွင်ပြောလျှင် လက်ကြာကြာကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်းတွေကိုပဲပြောပါ။ စကားထ မများချင်လျင် ဆိုးတာတွေကိုလုံးဝရှောင်ပါ။ သင့်ရည်ရွယ်ချက်က သူကြွေအောင် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝသူတစ်ယောက်ဖြစ် ကြောင်း အသိပေးတာပါ။ လိုသလို အသုံးချ ကြပါကုန်။
ခြိနျးတှရေ့ငျ ဘာတှပွေောရမလဲ ?
ဆျောတှေ ကိုခြိနျးတှတေဲ့ အခြိနျကြ ရငျ သူမ ပြျောနအေောငျ ၊နောကျတဈခါ ထပျတှခေ့ငျြ အောငျ၊ သူမရဲ့အသညျး ကို သိမျးပိုကျနုိုငျအောငျ ဘာတှပွေောရမလဲ ဆုိုတာ အရှယျရောကျလာတဲ့ ယောကျြားလေးတိုငျးမှာရှိတဲ့ မေးခှနျးတဈခုပါ။ သငျ ပွောလိုကျတဲ့ စကားတဈခှနျး သငျလုပျလိုကျတဲ့ အပွုအမူတဈခုဟာ နောကျတဈခါ ထပျ တှရေ့ေး မတှရေ့ေး ကို အဆုံးအဖွတျပေးသှားနျိုငျပါတယျ။ ဒီနတေ့ော့ သငျ့နောကျတဈခါ ခြိနျးတှတေဲ့ အခြိနျပွောရမယျ့ အကွောငျးအရာတဈခုကို ဖျောပွပေးပါမယျ။ ဒါကို ပထမဆုံး ခြိနျးတှတေဲ့ တဈခောကျ နှဈခောကျလောကျမှာ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
လကျညိုး နှငျ့ လကျ သူကွှယျ ကှာခွားခွငျးအကွောငျး
အမြားသောအားဖွငျ့ လူတိုငျးရဲ့ လကျညိုးနဲ့ လကျသူကွှယျ ဟာ အတိုငျးကှာပါတယျ။ အဲဒီကှာခွားရတာ အလကားသကျသကျ မဟုတျပဲ ခိုငျလုံတဲ့ အကွောငျးပွခကျြရှိပါတယျ။ ဒါကတော့ လူတိုငျးက မမှေးခငျ မိခငျဝမျးထဲမှာ ရှိစဉျ က မိခငျရဲ့ ဟျောမုနျး အပွောငျးအလဲပျေါမူတညျနပေါတယျ။ မိခငျမှာ တကျစတုိုစတုနျး ချေါ (ကြား) ဟျောမုနျးမြား နခေဲ့တယျဆိုရငျ လကျသူကွှယျက ပိုရှညျနတေကျပါတယျ။ အကယျ၍ လကျညိုးကပိုရှညျနတေယျ ဆိုရငျတော့ အိစတုိုဂငျြလို့ချေါတဲ့ (မ)ဟျောမုနျးကမြားနခေဲ့လို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီဟျောမုနျး လှမျးမိုးမှု က လကျညိုး အတိုအရှညျ ပျေါမှာ တငျမရပျသှားပဲ ကွီးလာသညျ အထိ လူတဈယောကျရဲ့စိတျကို လှမျးမုိုးမှု အနညျးနဲ့ အမြားရှိနိုငျပါတယျ။
လကျညိုးရှညျတဲ့ မိနျးခလေးတှေ (မ) ဟျောမုနျးမြားခဲ့တဲ့အတှကျ မိနျးမဆနျဆနျနတေကျပွီး အခကျြအပွုတျစိတျဝငျစားခွငျး၊ အလှအပ မကျမောခွငျး၊ ခြှဲနှဲ့တကျခွငျး၊ တဝနျတိုစိတျမြားခွငျး၊ စတဲ့ မိနျးမလေးတျောတျောမြား မြားမှာ ရှိတကျတဲ့ အကငျြ့မြားကို ပိုငျဆိုငျထားတကျကွပါတယျ။ အကယျ၍သား သမီးရလာပွီဆိုတဲ့ အခါကရြငျလဲ သားသမီးတှေ အပျေါ ဂရုစိုကျ ၊ အနဈနာခံ တဲ့ မိခငျကောငျးတဈယောကျဖွဈလာမှာပါ။
တဖနျလကျ သူကွှယျရှညျတဲ့ မိနျးခလေးမြားက တော့ မိမိ ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိပွီး လူအမြားနှငျ့ အပေါငျးအသငျးဆံ့ခွငျး၊ လုပျငနျးမြား ကို ကိုယျတိုငျ လုပျကိုငျခငျြခွငျး၊ စှံစားရဲကာ လုပျရဲကိုငျရဲ ရှိခွငျး စတဲ့ အခကျြမြားကိုပိုငျဆိုငျထားမှာပါ။ ထျုိုမိနျးခလေးမြားကတော့ မိမိ လုပျငနျးမြားကို ဝငျရောကျကူညီနိုငျသော ယောကျြားသဘာဝကို ပိုမိုနားလညျနျိုငျသော မိနျးခလေးမြားဖွဈနိုငျမညျ။ တဖနျ ယောကျြားမြားကို အထငျကွီးတဲ့စိတျ လညျးနညျးမညျဖွဈကာ ယောကျြားမရှိလညျး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ရပျတညျနိုငျသညျဟု ယူဆထားသော ဆှာကယျြလေးမြားဖွဈနျိုငျသညျ။
(ဖျောပွပါအခကျြမြားသညျ ယဘေုယ အားဖွငျ့ ကောကျယူထားသော အခကျြအလကျမြားဖွဈ၍ သငျ့ဆျောနှငျ့ အသငွေငျးရနျ အတှကျမဟုတျပါ။ တခြို့သောသူမြားသညျ ဖျောပွပါအခကျြမြား နှငျ့ ဆနျ့ကငျြဖကျဖွဈမညျဖွဈသောကွောငျ့ မီးစငျ ကွညျ့ကကွပါရနျ)
နောကျထပျ ကောငျးတာက သူ့ရဲ့လကျကို ပျေါတငျကိုငျဖို့ အကွောငျးပွခကျြကောငျးလေးတဈခုပါ။ ဘယျဘကျလကျ ကို အရငျကိုငျပွီး မှ “အောငျ ညာဘကျလကျကို ကွညျ့ရမှာ ဟုပွောကာ ညာဘကျလကျကိုထပျကိုငျပွီး ပွောပွရငျး ခဏခဏ ထပျထပျကိုငျလို့ရမညျဖွဈသညျ။ ကိုယျပိုငျစိတျကူးဖွငျ့ ခြဲ့ထှငျပွောလြှငျ လကျကွာကွာကိုငျရမညျဖွဈသညျ။ အကောငျးတှကေိုပဲပွောပါ။ စကားထ မမြားခငျြလငျြ ဆိုးတာတှကေိုလုံးဝရှောငျပါ။ သငျ့ရညျရှယျခကျြက သူကွှအေောငျ ဗဟုသုတ ကွှယျဝသူတဈယောကျဖွဈ ကွောငျး အသိပေးတာပါ။ လိုသလို အသုံးခြ ကွပါကုနျ။
Previous: ချစ်သူနှစ်ဦးပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းစည်းနို်င်ရန်အတွက် စိတ်ထားကောင်း ၂ ခုသာလိုအပ်
Next: စိတ်ထားကောင်းမွေးမြူ ရန်လိုအပ်သော အခြေခံ အချက် ၅ ချက်